Ravinala Airports : Vita ny 25%-n’ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato -
AccueilRaharaham-pirenenaRavinala Airports : Vita ny 25%-n’ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato
Tamin’ny volana jona 2017 ny lanonam-pahafantarana ny fanombohan’ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, ilay antsoina hoe Ravinala Airports. Valo volana aty aoriana, tontosa hatramin’ny 25% ny asa fanitarana sy fananganana ilay fotodrafitrasa goavana ho amin’izany. Noho izay indrindra, dia tonga nitsidika ifotony teny an-toerana nijery ny fandrosoan’ny asa ny Filoham-pirenena sy ireo minisitra vitsivitsy mpikambana eo anivon’ny governemanta, ka anisan’izany ny minisitra eo anivon’ny prezindasa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana, Benjamina Ramanantsoa, sy ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola, Vonintsalama Sehenosoa. Tamin’izany indrindra no nilazan’ny Filohan’ny Repoblika fa mandroso ny asa, ary mahavelom-bolo.
Nandritra izany fitsidihana izany no nahafahan’ireo mpikambana amin’ny Filankevi-pitantanan’ny Ravinala Airports namelabelatra tamin’ny Fitondram-panjakana ny dingana rehetra amin’ny fananganana sy fanamboarana.
Raha ny fanazavana hatrany, dia mirefy hatrany amin’ny 17 500 m2 ny velaran-tany hametrahana ilay fotodrafitrasa izay efa tontosa hatrany amin’ny 25%. Tafiditra amin’izany ny “Tarmac”, izay natao hiantsonan’ny fiaramanidina. Eo ihany koa ny fiantsonan’ny fiaran’ny mpitsidika, sns. Voalaza fa mahazaka mandray mpandeha hatrany amin’ny 1.5 tapitrisa isan-taona ity seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato ity, ary manaraka ny fenitry ny “Association du Transpors Aérien Iternational” na IATA. Marihina fa hanomboka amin’ny faran’ny volana marsa 2018 ihany koa ny fanavaozana ny “piste”.
Ankoatra izay, dia manampy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny Ravinala Airports amin’ny alalan’ny fanadiovan-drano (STEP).